वाणिज्य घर जग्गा लगानी कोष | ग्लोबल रियल एस्टेट कोष - REICG
घर जग्गा लगानी Reiआविष्कार गरियो®
एक अमेरिकी वाणिज्य घर जग्गा लगानी कोष
ग्लोबल लगानीकर्ताहरूको लागि
मा पढ्नुहोस् ...
गैर-अमेरिकी लगानीकर्ताहरू हुन सक्छ पहिलो
अब लगानी गर्नुहोस्
हाम्रो REI लगानी दर्शनले वारेन बुफे मोडेलको नक्कल गर्छ,
"हाम्रो मनपर्ने पकड अवधि सदाको लागि हो"।
हामी व्यावसायिक घर जग्गा खरीद गर्छौं र सदाको लागि समात्छौं! सबै भाडा आय अधिक वाणिज्यिक गुणहरू खरीद गर्न पुन: प्रयोग गरिनेछ, को मूल्य बढ्दै घर जग्गा लगानी कोष तेजी बाट।
हामी व्यावसायिक घर जग्गा खरीद गर्छौं र सदाको लागि समात्छौं! सबै भाडा आय अधिक वाणिज्यिक सम्पत्तिहरू खरीद गर्न पुनः प्रयोग गरिनेछ, कोषको मूल्य बढ्दो रूपमा बढाउँदै।
कसरी REICG वाणिज्य घर जग्गा कोष फरक छ?
अधिकांश घर जग्गा लगानी कोषले दुई तर एउटा तरिकामा फिर्ता वितरण गर्दछ, या त वितरण / लाभांश वा अन्तर्निहित सम्पत्ती को तरलताको माध्यमबाट।
REICG ले हाम्रो घर जग्गा अधिग्रहणबाट उत्पादित नगद प्रवाहलाई थप सम्पत्तिहरू खरीदमा पुनर्बहाली गर्दछ। यस लगानी पद्धतिले कोषको जम्मा नगद प्रवाह बढाउँदछ, फन्डलाई अधिक गुणहरू खरीद गर्न अनुमति दिईन्छ, पोर्टफोलियो तेजी बढाउँदै। आरआईआईसीजी एक दीर्घकालीन लगानी उत्पाद हो जुन फन्डको मूल्यको प्रशंसा मार्फत लगानीकर्ताको पैसा बढ्छ।
धेरै जसो घर जग्गा लगानी सीमित तरलता संग प्रकृतिमा दीर्घकालीन हो, तर आरआईआईसीजी ले एक तरलता वाहन को विकास गरीएको छ ताकि लगानीकर्ताहरु लाई आफ्नो समयसीमा शेयरहरु को तरलता प्रदान गर्न।
हाम्रो कोष यहाँ जानुहोस्
रियल इस्टेटमा लगानी गर्नुहोस् विश्वका धनी परिवारहरू जस्तै।
शीर्ष १% ले तिनीहरूको सम्पत्ति व्यापारिक घर जग्गाको साथ पुस्ताको लागि बढेको छ। उनीहरूसँग लगानी ग्रेड किन्नको लागि विशेष पहुँच छ, वाणिज्य घर जग्गा, र यी सम्पत्तिहरूलाई लामो अवधिको लागि होल्ड गर्नुहोस्।
तिनीहरूले भाँडाई आयको बहुमतलाई अधिक रियल ईस्टेटमा पुन: निवेश गर्दछन् र तिनीहरूको सम्पत्ती द्रुत रूपमा बढाउँछन्।
ए मा किन लगानी गर्ने ? REI Capital Growth वाणिज्य घर जग्गा लगानी कोष?
तपाइँको लागी काम गर्न को लागी तपाइँको पैसा राख्नु वित्तीय स्वतन्त्रता को लागी एक सिद्ध मार्ग हो। र त्यसोभए अचल सम्पत्ति उद्योग मा काम गर्न को लागी तपाइँको पैसा राख्ने लाभ को एक अद्वितीय सेट छ।
अचल सम्पत्ति मा लगानी को अन्य धेरै प्रकार को लगानी को तुलना मा अधिक स्थिर हुन जान्छ विशेष गरी जब एक अचल सम्पत्ति कोष मा लगानी गरीन्छ जहाँ पेशेवरहरु सबै कुरा को प्रबंधन। जे होस्, धेरैजसो मानिसहरु मान्दछन् कि तपाइँ मात्र घर बनाएर वा आफैंबाट सम्पत्ती किनेर अचल सम्पत्ति मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
A घर जग्गा लगानी कोष अचल सम्पत्ति लगानी बजार मा प्राप्त गर्न को लागी एक प्रमाणित तरीका हो।
तर त्यो भन्दा पहिले, मूल कुराहरु लाई हेरौं।
एक अचल सम्पत्ति लगानी कोष के हो र यो कसरी काम गर्दछ?
एक अचल सम्पत्ति लगानी कोष अचल सम्पत्ति मा लगानी को उद्देश्य व्यक्तिगत वा कर्पोरेट लगानीकर्ताहरु बाट धन को एक संग्रह हो। कानूनी अर्थ मा, एक अचल सम्पत्ति कोष एक कर्पोरेट संस्था एक साथ दिमाग लगानीकर्ताहरु लाई एक साथ ल्याउन को लागी बनाईएको हो। धेरै पटक, अमेरिकी वाणिज्य अचल सम्पत्ति कोष लगानीकर्ता पूँजी प्रशंसा को माध्यम बाट मुनाफा कमाउँछन्।
अचल सम्पत्ति कोष मा लगानी को केहि लाभ
#१: पोर्टफोलियो विविधीकरण
चाहे तपाइँ एक विशेषज्ञ हो वा होईन, यो औसत लगानीकर्ता को लागी बजार परिवर्तन वा डाउनटर्न को सही ढंगले सम्पत्ती को प्रबंधन को लागी भविष्यवाणी गर्न को लागी चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
जब बजारहरू परिवर्तन हुन्छन्, केहि प्रकारका घर जग्गा गुणहरू अरू भन्दा जोखिमपूर्ण हुन सक्छन्। यस प्रबन्धको शीर्षमा, एक मात्र होइन धेरै गुणहरूमा लगानी पेशेवरहरू बाहेक लगभग असम्भव हुन सक्छ। त्यहीँ हो REI Capital Growth व्यावसायिक घर जग्गा कोष चलाउन र बढाउने वर्षको अनुभवको साथ आउँछ।
#२: कम प्रवेश बिन्दु
यसको सट्टा काम गर्न को लागी जब सम्म तपाइँ सम्पत्तिहरु किन्न को लागी ठूलो पैसा बचाउनुहुन्छ, हाम्रो अमेरिकी वाणिज्य अचल सम्पत्ति कोष तपाइँ कम पूँजी र धेरै कम काम संग लगानी शुरू गर्न को अवसर प्रदान गर्दछ।
#३: निष्क्रिय लगानी रणनीति
घर जग्गा गुणहरू फेला पार्न, निरीक्षण गर्न र प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियाहरू विचार गर्दा, त्यो एक्लै पूर्ण-समय काम हुन सक्छ। वर्षौको अनुभव संग, REI Capital Growth हाम्रो कमर्शियल रियल इस्टेट इन्भेष्टमेन्ट कोषमा तपाईलाई एक साँच्चै निष्क्रिय अवसर प्रदान गरी काममा कसरी राम्रोसँग राख्ने र पुरस्कारहरू कटनी गर्ने भनेर जान्दछन्। हामीले सुरुदेखि अन्त्यसम्म सबै काम गर्छौं। तपाईको जिम्मेवारी ? लगानी गर्नुहोस्, कम्पाउन्ड गर्नुहोस्, र शीर्ष 1% जस्तै पुस्ताको सम्पत्ति बढाउनुहोस्।
शीर्ष १% ले तिनीहरूको सम्पत्ति व्यापारिक घर जग्गाको साथ पुस्ताको लागि बढेको छ। उनीहरूसँग लगानी ग्रेड, वाणिज्य घर जग्गा किन्नका लागि एक्स्क्लो पहुँच छ, र यी सम्पत्तिहरूलाई लामो अवधिको लागि होल्ड गर्नुहोस्।
यो कसरी काम गर्दछ जान्नुहोस्
970 XNUMX० समर सेन्ट
स्ट्यामफोर्ड, CT 06905 USA
सोम-शुक्र: :9: ०० बिहान - :00:०० बेलुका EDT
शनि-सूर्य: बन्द छ
ठूलो वित्तीय लगानी वा अघिल्लो अनुभव बिना जो कोही एक अन्तर्राष्ट्रिय घर जग्गा लगानीकर्ता बन्न सक्छ। आज नयाँ प्रकारको REI कोषसँग लगानी गर्नुहोस्!
घर जग्गा लगानी कोष
इक्विटी टोकन प्रस्ताव
बन्ड टोकन प्रस्ताव
© 2022 REI Capital Growth, LLC | सबै अधिकार सुरक्षित।
"The Reinvented Funds®"र"Real Estate Investing Reinvented®दुबै REI क्यापिटल म्यानेजमेन्ट LLC का दर्ता गरिएका ट्रेडमार्कहरू हुन्।
आरआईआई क्यापिटल मैनेजमेन्ट (आरआईआईसीएम) एक वेबसाइट संचालित गर्दछ reicapitalgrowth.com ("" साइट ") मा। साइट प्रयोग गरेर तपाईं हाम्रो सेवा सर्तहरू र गोपनीयता नीति स्वीकार गर्नुहुन्छ। कुनै पैसा वा अन्य कन्सेडरेशन सुन्चित भैरहेको छैन, र यदि पठाइएको हो भने, स्वीकार्य हुने छैन। कुनै पनि प्रकारको चासो वा समितिको कुनै चासो नदेखी ब्याज इन्कल्शनको सूचक प्राप्त गर्न सकिदैन र खरीद गर्न सकिने कुनै पनि भाग खरीद गर्न मिल्दैन सेक द्वारा क्वालिफाइड कुनै पनि प्रस्ताव छनौट वा अस्वीकृत हुन सक्छ, कुनै पनि प्रकारको दायित्व वा स्वीकृति बिना, कुनै पनि समय योग्यता को सुनुवाइको सूचना पछि दिइन्छ।
सबै सेकुरिटीमा जोखिम समावेश छ र आंशिक वा कुल घाटामा परिणाम हुन सक्छ। हामी, REICG र सबै REICG सम्बद्धहरूलाई संदर्भ गर्दै, कर सल्लाह वा लगानी सिफारिशहरू प्रदान गर्दैनौं। यहाँ वर्णन गरिएको कुनै पनि परिणामहरू यस साइटमा वा कहिँ पनि निश्चित छैन न त उनीहरूले कुनै खास लगानी वा करको परिणाममा ग्यारेन्टी दिइन्छ। सम्भावित लगानीकर्ताहरूले उनीहरूको व्यक्तिगत परिस्थितिहरूको आधारमा कर परिणामहरूको बारेमा व्यक्तिगत कर सल्लाहकारहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्छ। आरआईआईसीएमले प्रायोजित प्रस्तावमा लगानी गर्ने कुनै पनि लगानीकर्ताको योजनामा ​​कर नतिजा वा लगानीको नतिजाका लागि जिम्मेवार ठान्दैन। यस वेबसाइटमा सन्देशहरू बेच्नको प्रस्ताव वा कुनै पनि सुरक्षामा रूचिको लागि अनुरोध गरीरहेका छैनन्। हामी हाम्रो आधिकारिक प्रस्ताव कागजातहरू जस्तै निजी प्लेसमेन्ट ज्ञापनपत्र वा प्रोस्पेक्टस मार्फत बाहेक कुनै अनुरोध गर्दैनौं। यी प्रस्ताव कागजातहरू मात्रै हाम्रो "निवेश" अब क्राउडफन्डि portal पोर्टल मार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ।
कृपया जारी राख्नको लागि तपाईंको स्थान साझेदारी गर्नुहोस्।
हाम्रो जाँच गर्नुहोस् मद्दत गाइड थप जानकारी को लागि।
कुकी सेटिङहरू परिवर्तन गर्नुहोस्
यदि तपाईंले यस कुकीलाई असक्षम गर्नुभयो भने, हामी तपाईंका प्राथमिकताहरू सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्न। यसको अर्थ तपाईंले यो वेबसाइट भ्रमण गर्नुहुँदा प्रत्येक पटक तपाइँलाई कुकीज सक्षम वा असक्षम गर्न आवश्यक छ।